अर्कैको शव अन्त्यष्टि गरेर फर्किदा आफ्नो छोराको शव आँखै अगाडी यसरी फेला परेपछि… – PathivaraOnline
Home > समाचार > अर्कैको शव अन्त्यष्टि गरेर फर्किदा आफ्नो छोराको शव आँखै अगाडी यसरी फेला परेपछि…
अर्कैको शव अन्त्यष्टि गरेर फर्किदा आफ्नो छोराको शव आँखै अगाडी यसरी फेला परेपछि…
admin September 8, 2020 September 8, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाडौ । बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ मा यही भदौ १७ गते आएको बाढीले ठूलोमात्रामा जनधनको क्षति पुर्याएको छ । रातको समयमा बाढी आउँदा सु’ते’का स्थानीयवासीसँगै ढोरपाटनका आधा दर्जन गाउँ बगरमा परिणत भए ।
बाढीमा हालसम्म १७ जनाको निधन भइसकेको छ भने अझै २१ बेपत्ता छन् । हालसम्म फेला परेका शवमध्ये १५ जनाको मात्र सनाखत भइसकेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १८ गते बिहानैदेखि खोज तथा उद्धारको काम हालसम्म भइरहेको छ तर बाढीको वितण्डा यतिसम्म देखियो कि निधन भएको अवस्थामा भेटिएका शव नचिनिने अवस्थामा भेटिए । फलस्वरुप परिवारले आफ्नै गुमाएका सन्तानको शवसमेत ज’ला’उ’न पाएनन् । अर्कैले अन्त्यष्टि गरिदिए ।
जीवनभर आफ्नो सन्तानको माया नहुने बाबुआमा सायदै होलान् । आफूलाई बुढेसकालमा हेरविचार गरुन् भन्ने सोच्छन् र त्यो जिम्मेवारी पनि हुन्छ तर विधिको विडम्बना आफ्ना नौजवान छोरासहित परिवारका चार सदस्यसम्म बाढीको विपत्मा सदाका लागि गुमाएका छन् ।
यो त दुःखान्त पीडाको खबर थियो नै । यसमा अझ पीडा त बाढीमा बेपत्ता भएर ज्यान गुमाएका आफ्नो दिवङ्गत छोराको शव अर्कैले अन्त्यष्टि गरिदिएका छन् । यो थाहा पाएपछि परिवारलाई कति पीडा भएको होला रु बेपत्ता भएको आफ्नो छोरालाई अर्कैले अन्त्यष्टि गर्दा बाबुआमाको मन कति दुखेको होला रु हामी त केवल अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ ।
ढोरपाटनको बाढीमा बेपत्ता भएका आफ्नो २२ वर्षीय छोरा नारायण विकको शव घट्टबोटका बेपत्ता ३१ वर्षीय प्रेम पुनको शव भन्दै प्रहरीले आफन्तको जिम्मा लगायो । आफन्तले पनि नारायणको शव प्रेमको ठानेर १९ गते फेला परेर सोही दिन बुर्तिवाङघाटमा अन्त्यष्टि गरिदियो । प्रेमका आफन्तले अर्कैको शव अन्त्यष्टि गरेर आएको भोलिपल्ट बिहान पुनः उनको सग्लो शव फेला पारेपछि २० गते फेरि पुनको शव बुर्तिवाङघाटमै अन्त्यष्टि गरियो तर नारायणका परिवारले आफ्नो छोराको शव भेटिँदासमेत अन्त्यष्टि गर्न पाएनन् ।
भदौ १९ गते अन्त्यष्टि भइसकेको शव आफ्नो छोरा भएको २० गते प्रेमकोे परिवारले दोस्रो अन्त्यष्टि गरेपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको नारायणका बुवा तुलबहादुर विकले बताए । ‘प्रहरीले मलाई थाहै नदिई मेरो छोराको शव अर्कैको भनेर बुझाइसकेर अन्त्यष्टि भइसकेको रहेछ’, तुलबहादुरले भने, ‘मेरो छोरालाई प्रेम पुनको शव भनेर अन्त्यष्टि गरेको भोलिपल्ट उनको शव फेला पारेको रहेछ, मैले २० गते मात्रै १९ गते प्रेम पुन भनेर अन्त्यष्टि गरेको शव मेरो छोरा नारायणको भएको पत्ता लगाएँ, असाध्यै दुःख लाग्यो ।’
आफ्नो छोरा नारायण र प्रेमको शरीर र उमेर मिल्दोजुल्दो भएका कारण प्रहरीले झुक्किएर प्रेमको आफन्तलाई जिम्मा लगाएको उनको भनाइ छ । भदौ १९ गते फेला परेको शव एकपटक हेर्न पाएको भए चिन्ने अवस्था रहे पनि आफूलाई खबर नै नगरेको उनले बताए । ‘कसैले दुईपटकसम्म अन्त्यष्टि गर्न पर्यो, आफ्नो छोरालाई अर्कैले अन्त्यष्टि गरिदिए गर्न पाइनँ ।’
नारायणलाई १९ गते नै अन्त्यष्टि गरेको २० गते थाहा पाएपछि कपाल मुण्डन गरेको उनको भनाइ छ । तुलबहादुरका छोरा नारायणसहित बुहारी, नातिनी र छोरीलाई समेत बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएको छ । तीन जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहँदा भेटिएको शवसमेत देख्न नपाई अन्त्यष्टि गरेको उनको दुखेसो छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रहरी इन्चार्ज प्रकाशसिंह भण्डारीका अनुसार फेला परेको शव नचिनिने भएकाले पहिचानमा समस्या भएको बताए । ‘१९ गते फेला परेको शव ३१ वर्षीय प्रेम पुनको भएको पुनका आफन्तले भनेपछि हामीले अन्त्यष्टि गर्नका लागि बुझायौँ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसको भोलिपल्ट प्रेम पुनको सग्लो शव फेला परेपछि बल्ल सनाखतमा समस्या भएको थाहा पाइयो ।’
सुरुमा मेरै सरले गरे… पछि अर्का सरलाई पनि ल्याउन थाले !
सुशान्त प्रकरण : अन्ततः रिया पनि परिन् फन्दामा
कोरोनाको आशंका गर्दै अस्पतालले भर्ना नलिएपछि एम्बुलेन्समै बिरामीको मृत्यु
यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा विद्यार्थीले त्रिवि सहायक डीनलाई दले मोसो – पुरा हेर्नुहोस
७८ हजार लुट्नकै लागि जंगलमा बाटो ढुकेर सुजाताको हत्या ! ३ बजे बाबालाई फोन गरेर यस्तो भनेकी रहिछन !